Sida loo kiciyo Mac-ga qaab aamin ah | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo Boot Mac aad Mode ammaan ah ee dhibaato
Jordi Gimenez | | Mac OS X, Kombiyuutarada Mac, Tababarada
Mid ka mid ah xulashooyinka aan heysanno si aan u bilowno Mac-geena oo aan u hubinno dhibaatooyinka software ee suurtagalka ah ee ka hortagaya inuu socdo ama si fudud u sameeyo jeegga mashiinkeenna dhibaatada, waa Kabo Ammaan ah ama Hab Ammaan ah.
Si loo fuliyo hawshan waa inaan raacnaa dhowr tallaabo inta lagu guda jiro bilaabista mashiinkeenna tanna inkasta oo ay u muuqan karto mid murugsan, maahan. Maanta waxaan arki doonaa mid mid iyo si cad talaabooyinka si aad u bilaabi kartaa Mac in hab amaan ah si hagaaji cilladda suurtagalka ah markaad dhibaato leedahay.
1 Muxuu si sax ah u qabtaa habka nabdoon
2 Kabaha u gal Habka Nabdoon
3 Astaamaha aan lagu heli karin qaab aamin ah
Muxuu si sax ah u qabtaa habka nabdoon
Waxa ugu horreeya ee Mac-du sameyneyso markii aan ku bilaabanno xaalad nabadgelyo leh ayaa hubinaya diskka bilawga ah oo isku dayaya inuu hagaajiyo dhibaatooyinka buugga. Markaad ku bilowdo Mac qaabkan, mashiinku wuxuu raacayaa kaliya kordhinta hoose ee aasaasiga ah, wuxuu joojinayaa font-yada aan ku raranay Mac-geena, walxaha boot-ka iyo walxaha lagu soo galona ma furmayaan inta lagu guda jiro buuga iyo bilowga.
Laga soo bilaabo OS X 10.4 kaydinta font ee ku kaydsan /Library/Caches/com.apple.ATS/uid/ waxaa loo raraa Qashinka (halkaas uid waa lambarka Aqoonsiga isticmaalaha) iyo OS X v10.3.9 ama qoraalkii hore, hab nabadgelyo leh ayaa furaya kaliya waxyaabaha kabaha ee Apple ay rakibtay. Waxyaabahan waxaa badanaa laga helaa / Maktabada / Bilaabida Waxyaabaha. Waxyaabahani way ka duwan yihiin waxyaabaha gelitaanka koontada ee uu soo xushay isticmaalaha.
Kabaha u gal Habka Nabdoon
Nidaamka boot boot ee habka aaminka ah waa mid aad u fudud tanna waa inaan raacno talaabooyinkan. Midka ugu horreeya uguna muhiimsan waa dami Mackeena. Marka Mac la demiyo waxaan bilaabi karnaa hawsha iyo tan tan aan dib u bilowno Mac.
Inta aan kabaha ku dhejineyno Mac iyo daqiiqado ka dib markaan maqalno dhawaqa bilowga astaamaha, waxaan riixnaa furaha Shift. Qulqulka ayaa muhiim u ah in la fuliyo xilligan dhawaqa bilowga, haddaan horay u sameyno ma shaqeynayso. Marka calaamada Apple soo muuqato, , waan joojineynaa cadaadiska.
Waa wax caadi ah haddii hawshan kadib Mac-dayada qaadataa wax yar ka dheer si ay u bilaabaan shaashadda guriga, ha quusan oo dulqaad maadaama mashiinku sameeyo hubin tusaal ah oo qayb ka ah habka badbaadada waana sababtaas sababta ay ugu dheeraato.
Astaamaha aan lagu heli karin qaab aamin ah
Hawlaha laga heli karo Mac-dayada markaynu ku jirno xaalad nabadgelyo ayaa hoos u dhacday iyo kiiskan ma awoodi doonno inaan adeegsanno qalabka DVD-ga ah, Adiguna ma awoodid tafatir fiidiyow ama duub iMovie ama isticmaal qalabka codka lagu rido ama qalabka wax soo saarka.
Isku xirnaanta USB, FireWire, iyo Thunderbolt lama heli karo ama in aysan shaqeynaynin markaan kujirno qaabkan iyo Shabakadaha Wi-Fi way xadidan yihiin ama aan la heli karin iyadoo ku xiran Mac iyo nooca OS X ee aan isticmaaleyno. Waa furey dardargelinta qalabka garaafka, barxadda OS X ayaa ah mid madmadow leh oo waxay joojisaa wadaagista faylka.
Marka dhibaatada la xaliyo ama dhibaatada lagu ogaado boot ammaan ah, waxaan dib u bilaabi karnaa mashiinka oo leh boot caadi ah. Tan awgeed waa inaan kaliya dib u bilaw Mac-keena adigoon fureynin wax fure ah. Haddii sabab kasta ha noqotee kumbuyuutarka uusan shaqeynin waxaad heli kartaa Terminalka meel fog ama adigoo ka galaya kombiyuutarka kombiyuutar kale adoo adeegsanaya SSH, laakiin tani waa mowduuc kale oo haddii aad rabto aan ku daabacno casharro kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo Boot Mac aad Mode ammaan ah ee dhibaato
Waad salaaman tahay, waad ogtahay inaysan waxba dhicin markaan riixo furaha aad leedahay, waxaan hayaa Yosemite, kan ugu dambeeya, wuxuu kusii dhaganyahay bartanka baarka ama ka yar, salaan kadib
Isla waxbaa igu dhaca, ma xalisay?
Jawaab FRANCISCO JAVIER RAMIREZ YEBENES
Tan markaan isku dayayo waxaan helayaa jahwareerka buniga ah, waa la iiga tagay anigoon bilaabin waxayna igu kaliftay ilaah waxayna igu caawineysaa soo kabashada mac, hadaan ogahay iskuma dayo inaan tan ugu isticmaalo habka nabada… Waxaan heli lahaa astaan ​​goobaabin leh iskutallaab dhexda oo ma bilaabi doonto ama waxba, halkaas ayay ahayd, mana adeegsaneynin nuqulka mashiinka waqtiga ay ahayd, waxay ka shaqeysay oo keliya qeybta soo kabashada si dib loogu rakibo OSX iyo tan kaliya hoos u dhac ayaa ah in faylasha Soo degsashada hadda loo yaqaan downloads mana haysto kubado aan ku beddelo magaca, waa doqonimo, laakiin way iga xanaajisay xoogaa markaan isku dayo tan waxaan qaatay ku dhowaad laba maalmood kumbuyuutar la'aan ... Haddii qof u socdo isku day, anigu ma aan samayn lahaa ...
Waad salaaman tahay shiryu222, wax howsha kujira adiga kuuma shaqeyn doonaan maxaa yeelay markaan sameyno casharro noocan ah waxaan tijaabineynaa kahor taasna wax dhibaato ah malahan. Kiiskeyga iMac, wax dhibaato ah ma muuqan oo kaliya mashiinka ayaa xukumaya ayaa bilaabay dhibaato la'aan.
Waan ka xumahay waxa kugu dhacay, laakiin waa wax lala yaabo maxaa yeelay waxa kaliya ee howshani qabato waa hubinta shaqada saxda ah ee mashiinka mana taabanayo qaabeyn iyo wax la mid ah.
Ka waran, dhibaato weyn ayaan ku qabaa imackeyga, waxaan isku dayay inaan rakibo qaniinyada yar yar waxayna dib u bilaawday dhexda rakibida, dps waxay umuuqatay inay sifiican ushaqeyneyso laakiin mudo kadib dhamaan xiriirada waa la jaray, bluetoth, usbe, internet, wax walba, halkaas ayaan isku dayey inaan ka bilaabo oo way ka sii dartay, jiir iyo kumbuyuutar midkoodna ma lihin (waxay umuuqataa inaysan mowduuca ahayn, waan samray waana ku mahadsantahay!), Kadib isku dayo dhowr ah iyo isku day hab aamin ah oo kaliya furaha mashiinka la aqbalay wuxuu ahaa «utility of disk» amarka + r, halkaasna waan ku hubsaday oo waan ku hagaajiyay diskka laakiin tbn ayaa ku tuuray qalad, tan iyo daqiiqadaas mashiinkeygu ma bilaabi karo, waxay u timid xamuul iyo damis, kaliya shid qaabka utility diskka halkaasna HD wuxuu umuuqdaa mid lagu xanibay dib u x x internet yosemite, maxaan sameeyaa? Waxaan quussanahay xitaa ma awoodo inaan keydiyo faylalka adeeggeyga! Ma jirtaa waddo kale oo lagu galo xaalad ammaan ah? midka furaha «far waawayn» aniga ilama shaqeeyo, waan ka xumahay in aan is kordhiyo, wax badan kama aqaanno meelaha lagu kulmo Mahadsanid!
Ku jawaab Lefo
Hagaag, baadhitaan yar, tani waxay igu dhacday aniga maxaa yeelay waxaan haystaa ssd aan tufaax ahayn oo leh firfircooni gooyn leh barnaamij dhinac saddexaad ah, waana dhici kartaa in saxiixa kext la dhaqaajin doono oo marka la bilaabayo uusan u oggolaan doonin diskiga waa la aqrinayaa, marka ma garanayo haddii aan Adigu taas waad xaqiijin kartaa iyo haddii ay sidaas tahay, way fiicnaan lahayd haddii aad ku muujisay qoraal kale ama kan, adoo wax ka beddelaya si dadka wax gooyay ay u hawl-galaan ka hor intaysan sidan ku furin. Ka fogow xumaanta ka sii weyn, taas oo kiiskeyga aan isku xallin karo inkasta oo aanan khibrad weyn u lahayn mac-mac adduunka waana sababtaas sababta aan u raaco degelkan iyo halkii aan ka ahaan lahaa madal kale.
Haddiise laga yaabo in faalladayda hore ku xumaysay, raalli-gelin baan ka bixinayaa.
Waad salaaman tahay: Sideen uga baxaa xaalada amni ee amarrada. Laga soo bilaabo shaley Macpro-kayga waxaa lagu shaqeysiiyay hab amaan ah laakiin ma dhameystirayo bilaabistiisa, baarka horumarka wuxuu qaadanayaa waqti dheer markuu buuxsamaana halkaas kama dhaafo. Waxaan doonayay in aan soo celiyo laakin aniga oo kujira xaalad amaan ah majiro xiriir internet oo la sameeyo. Sidii oo kale ayaa looga tegey xaalad nabadgelyo limbo.
Jawaab Judith Rivas
Apple wuxuu sii daayaa OS X 10.10.5 Beta Dadweynaha
Cusbooneysii qalabka kumbuyuutarkaaga 'Mac mini' laga soo bilaabo dhammaadkii 2012